Truth & Trust: အမေနှင့်မယ်ညို့ရုပ်ရည်
Posted by ညိုလေးနေ at 12:56 PM
I m also the same . For me I am the shortest not only in the family the whole relatives heehee Maymadi
ha ha..I am also the same. my mom is tall ,slim and very fair. while I am short , fat and round. Both my bother and sisters are slim and tall. I am the only one "bote ee" in the family..oh..well..you can't choose how you look , so I try to be the best person I can..
ဟယ်... နှာခေါင်းလေး မချွန်တာနဲ့ပဲ မယ်ညိုကို့ ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ပြောကြတယ်တဲ့လား။ ငါတော့ ဘယ်တုန်းကမှ နင့်ကို မလှဘူးလို့ မထင်မိပေါင်။း)
ဟင်... ဘယ်လိုလူတွေကများ ဘယ်လိုအကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုသတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ မယ်ညိုလေးကို ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ကြပါလိမ့်...?
ဝေးလံခေါင်ဖျား အရပ်ကနေ တစ်ခါတစ်ခေါက်လာတုန်း မယ်ညိုနဲ့ ဆုံဖူးလိုက်တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်ကတော့ ဖြူစင်တဲ့ အရယ်အပြုံးနဲ့ ရုပ်ကော၊ စိတ်ပါလှတဲ့ ညီမလေး တစ်ယောက်ကိုပဲ မြင်နေမိပါကြောင်း...။း)
Maymadi ..... shortest is the cleverest, right ? ;)
mi mi ..... yes , I believe you will be the best :)
ဇွန် ... ပြောလိုက်စမ်းဘာ .... ငါ့ ငါးချဉ်က ချဉ်ပါတယ်လို့ :D
အစ်ကိုညီလင်းသစ် ..... ဒါတောင်မှ မှတ်မိလွန်းတဲ့ လေးယောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲလိုမြင်တယ်ဆိုလို့ အလွန်တရာ ကျေနပ်ပစ်လိုက်ပြီ အစ်ကို :)))